'दुधकोशी दिप्लीघाट' मोटरेबल पुल शिलान्यास, कस्ले के भने ? - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
‘दुधकोशी दिप्लीघाट’ मोटरेबल पुल शिलान्यास, कस्ले के भने ?
सुमेरु संबाददाता १३ पुष २०७६, आईतवार ०५:२९
सोलुखुम्बु १३ – सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका र सोताङ गाउँपालिका जोड्ने गरि दिप्लीघाट स्थित दुधकोशी नदिमा निर्माण गरिने ‘दुधकोशी दिप्लीघाट’ मोटरेबल पुलको शिलान्यास गरिएको छ ।
शनिबार प्रतिनिधि सभा सदस्य हेम कुमार राई ‘सुरवीर’, प्रदेश सभा सदस्य उत्तम कुमार बस्नेत, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख वीर कुमार राई, थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राई, सोताङ गाउँपालिका अध्यक्ष वीर बहादुर राई, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिं लगायतले सामूहिक रुपमा हिन्दु परम्परा अनुसार पुजा गरि निर्माण स्थलमा ढुंगा राखेर शिलान्यास गरिएको हो ।
सम्झौता मितिले ३ बर्षमा पुल निर्माणका लागि १० करोड १८ लाख १९ हजार ७ सय २९ रुपैँयामा महादेब खिम्ती हिराचन जे.भि.ले जिम्मा लिएको छ । पुल ८० मिटर लामो बन्नेछ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य हेम कुमार राई ‘सुरवीर’ले लामो समयको कसरतपछि पुल निर्माणको काम कागजबाट हिल्डसम्म ल्याउन सफल भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘पुल निर्माणको शिलान्यासले दुधकोशी पारिका सर्वसाधारणमा बाह्रै महिना मोटर चढ्ने सपना पुरा हुने आशा पलाएको छ । निर्माण कम्पनीले समयमै पुलको काम सकोस्, हामी यहि चाहन्छौ ।’ आफूहरुले पनि जनप्रतिनधिको दायित्व पुरा गर्ने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य उत्तम कुमार बस्नेतले चुनाबी प्रतिबद्धता अनुसार नै विकास निर्माणको काममा लागि परेको दाब गरे । दिप्लीघाटको पुल आर्थिक सम्बृद्धिको ‘टर्निङ प्वाईन्ट’ भएकाले निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘पुल नबनुन्जेलसम्म सडक संचालनमा टेवा पु¥याउन बेलिब्रज बन्दैछ । अघिल्लो बर्ष कागजी कामको ढिलाई र मौसमका कारण ब्रिज निर्माण पुरा हुन सकेन्, यो बर्ष बन्छ ।’ उनले ‘भ्यागुतो उफ्राई’मा विकास गर्न चाहेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वीर कुमार राईले समयमै पुल निर्माणको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘कुनैपनि वाहनामा पुल निर्माणको समय लम्बनु हुदैन् । निर्माण व्यवसायलाई मेरो आग्रह छ ।’ पुल निर्माणको वातावरण बनाउन जनप्रतनिधि तत्पर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पुल निर्माण कम्पनीका संचालक रवि सिंले निर्माणको वातावरण बने निर्धारित समयमै पुल निर्माण हुने बताए । उनले भने, ‘तपाईहरुले सामाग्री ढुवान गर्ने सडकको व्यवस्था गरिदिनुस्, हामी काम गर्छौ ।’ निर्माण कम्पनीले गुणस्तरियता र समयमै निर्माणको काम सक्नेमा शंका नगर्न आग्रह गरे ।
नेचासल्यान गाउँपालिका अध्यक्ष डुफ कुमार बास्तोलाले ठेकेदारको लापरवाहीले जनप्रतिनिधिले आलोचना खेप्नु परेको अवस्थामा समयमै सम्पन्न गरेर सकारात्मक सन्देश दिन निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘समयमै पसल निर्माण गरेर आमनागरिकको तिब्र विकासको चाहनालाई पुरा गर्न कम्पनीलाई आग्रह गर्दछु ।’ उनले निर्माणको क्रममा वाहनाबाजी नगर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले तोकिएको समय भन्दा अघि नै निर्माणको काम सक्न निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘ढुवानी गर्न सक्ने रोक्ति–दिप्ली सडक चौडाको कुरामा स्थानीय सरकारले मात्र नसक्ने भएकालले प्रदेश र सघ सरकारले पनि हातेमोलो गर्नुपर्छ । सडक चौडाका लागि हामी समन्वयात्मक काम गर्छौ । तर सडकै कारण निर्माण अलपत्र बन्छ भन्ने होईन्, निर्माण कम्पनीको नियत सफा हुनुपर्छ ।’ सडक वाहनाको रुपमा नदेखाउन आग्रह गरे ।
सोताङ गाउँपालिका अध्यक्ष बीर कुमार राईले पुल निर्माणले जिल्ला सदरमुकाम र राजधानीसम्म सिधा र सहज रुपमा आवतजावत गर्न सक्ने वातावरण बन्ने आशा राखे । उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले जिल्लामा पनि थुप्रै योजना अलपत्र छन् तर यो काम त्यस्तो नहोला भन्ने आशा राख्छु ।’
नेकपा सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानवीर राईले दुधकोशी दिप्लीघाट मोटरेबल पुलले महाकुलुङ र सोताङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपुर्ण अर्थ राख्ने बताए । उनले भने, ‘मेरापिक, पाँचपोखरी लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रर्वद्धनमा पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ । आफू जिल्ला विकास समितिको सदस्य रहदादेखि नै दुधकोशी पारि जोड्ने सडक र पुल निर्माणको पक्षमा रहेको थिए ।’ समयमै पुल निर्माण हुनुपर्नेमा अध्यक्ष राईको जोड थियो ।
दिप्लीघाट स्थित दुधकोशी नदिमा अघिल्लो बर्ष निर्माण सक्ने भनिएको बेलिब्रिजको काम अझै सकिएको छैन् । यद्यपी, यो बर्ष बेलिब्रिजको काम सकेर संचालनमा ल्याईने प्रदेश सांसद उत्तम कुमार बस्नेतले दाबी गरे ।
प्रदेश सरकार, महाकुलुङ र सोताङ गाउँपालिका लगायतका निकायले आर्थिक साझेदारी गरेको बेलिब्रिज निर्माणको काम थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका भेगको घाटमा दुधकोशीको पानी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले ढिला भएको निर्माण समितिले जनाएको छ ।
अघिल्लो हिउँद देखि दुधकोशीमा ह्यूम पाईप विच्छ्याएर सिधा यातायात संचालन गरिएको छ । उद्यपी, दुधकोशीमा पुल नभएकै कारण बर्खायाममा दुधकोशी पारिसम्म सिधा यातायात ट्ट्दै आएको छ ।